Manenjika an'Andriamatoa Ceo Average 3.5 / 5 avy amin'ny 6
N / A, manana fomba fijery 31.4K
Otaku Oh Deok-Hae, izay mpiasa tsy tapaka, izay nijaly tato ho ato.
Izany rehetra izany dia satria ny sefo ao amin'ny orinasany dia mitovy amin'ny toetrany tiany indrindra, i Kaina!
Oh Deok-Hae izay otaku dia mpiasa mahazatra, ary efa nijaly tato ho ato.
Ny loharanon'ny olany dia ny lehibeny izay mitovy amin'ny iray amin'ireo olona tiany indrindra, i Kaina!
Saingy ny sefo, izay manana fianakaviana mahafinaritra, endrika tsara tarehy, fahatsapana lamaody mahatalanjona ary etika miasa tsara, indrisy, tsy tia an'i Oh Deok-Hae.
Ny lehibe dia manana fianakaviana mahafinaritra, endrika tsara tarehy, fahatsapana lamaody mahatalanjona ary etika miasa tsara. Mampalahelo fa tsy tia an'i Oh Deok-Hae.
Andriamatoa Filoha, azafady.
Rehefa mandeha ny andro dia manapa-kevitra ny hiala i Oh Deok-Hae.
“Tsy afaka mandeha miasa intsony aho amin'izao saina tsy madio izao!”
Inona no mitranga eto? Te hiala amin'ny asako aho fa tsy tian'ny lehibeko koa aho ?!
Tantaram-pitiavana mampihetsi-po an'ny olona roa!
Goblin Slayer: Andro vaovao marika
Photo Kano - Ny masonao ihany
Ny Vampire Ceo